पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आइसकेपछि पनि किन मर्छन् बिरामी ? – Himalitimes
पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आइसकेपछि पनि किन मर्छन् बिरामी ?
२०७८ जेष्ठ २७ १४:१६ मा प्रकाशित
काठमाडौ । कोरोना संक्रमण भएर पीसीआर रिर्पाेट नेगेटिभ देखिएका उद्योगी तथा टाइगर ब्रुअरीका अध्यक्ष तेजेन्द्र खड्काको यही ६ जेठमा गते निधन भयो ।
पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएको भोलिपल्टै १८ जेठमा विवेकशील नेपाली दलका पूर्व संयोजक उज्ज्वल थापाको निधन भएको थियो । उद्योगी खड्का र नेता थापाको निधन त प्रतिनिधि घटना हो । सुन्नमा कमै आए पनि पछिल्लो समय यस्ता बिरामीको संख्या बढिरहेको चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
कोरोनाभाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या आठ हजार नाघेको छ। पछिल्लो ५० दिनमा मात्रै पाँच हजार ७० जना नेपालीले ज्यान गुमाएका छन् । यी मध्ये कोरोना संक्रमणपछि रिर्पाेट नेगेटिभ देखिएका दुई सयभन्दा बढीको ज्यान गएको छ। यसबाट धेरैको जिज्ञासा उब्जिएको छ, आखिर कोरोना संक्रमण रिपोर्ट नेगेटिभ आइसकेपछि पनि किन मर्छन् बिरामी ?
काठमाडौंको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका प्रमुख कन्सल्टेन्ट डा. अनुप बाँस्तोलाका अनुसार शरीरमा कोरोनाभाइरस प्रवेश गरेपछि शुरुमा फ्यारिंग्स (घाँटीका नली) हरूमा भाइरस रेप्लिकेट (गुणात्मक वृद्धि) हुँदै जान्छ । त्यसपछि ती भाइरस फ्यारिंग्सबाट फोक्सो वा फोक्सोको कोशिकातिर सर्न थाल्छन् । र, केही दिनमै फोक्सोमा निमोनिया गराउँछन् ।
संक्रमण भएको सात/आठ दिनमा निमोनिया भइसकेपछि पीसीआर गर्दा रिपोर्ट नेगेटिभ आउनसक्छ । त्यसो हुनुको कारण के हो भने, नाक र घाँटीको ¥यालमा भाइरस नदेखिन सक्छ। त्यो रिपोर्ट नाकको रिपोर्ट हो, तर भाइरसले फोक्सो र अन्य अंगमा समेत पुगेर असर गरिसकेको हुनसक्छ । डा बाँस्तोला भन्छन् ‘त्यसैले पीसीआर नेगेटिभ आयो भन्दैमा कोरोना सिद्धियो भन्ने ठान्नु हुँदैन ।
जब कोरोना भाइरसले शरीरको एउटा अंग, फोक्सो खाइसकेको छ, निमोनिया गराइसकेको छ, शरीरको प्रतिरक्षा शक्तिलाई हाम्रै कोशिकाविरुद्ध लगाएको छ र शरीरमा रगत जम्ने प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ भने पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएर अर्थ हुँदैन।’ डा. अनुप बाँस्तोला भएभरको नोक्सानी भइसकेपछि रिपोर्ट नेगेटिभ नै आए पनि मानिसको ज्यान जान्छ। पोजेटिभ वा नेगेटिभ रिपोर्टले बाँच्ने र मृत्यु हुने निर्धारण गर्दैन । अस्पतालमा भर्ना भएका प्रायः सबै बिरामीको पीसीआर गर्दा रिपोर्ट नेगेटिभ आउँछ । त्यो स्वाभाविक हो । तर, पीसीआर नेगेटिभ आएपछि सन्चो भयो भन्ने हुँदैन ।
निषेधाज्ञामा पनि मृत्यु हुनेको संख्या घट्न सकेन ? सरकारले कोरोना संक्रमण दर घटाउन भन्दै लगाएको निषेज्ञाको डेढ महिना हसन लागेको छ । निषेज्ञाका कारण आम नागरिक रोगभन्दा भोको चपेटामा छन् । तर यो समयमा आइपुग्दा समेत संक्रमण र मृत्यूदर बढिरहेको छ । डेढ महिनादेखि निषेधाज्ञा लागू भए पनि कोरोना नियन्त्रणका लागि अन्य उपाय नअपनाउँदा ज्यान गुमाउनको संख्यामा कमि आउन सकेको छैन ।
पछिल्लो १० दिनमा पनि १ हजार ५० बढीले जनाले ज्यान गुमाएका छन् । १५ जेठमै पनि ११६ जनाको मृत्यु भएको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ९ हजार ७० पुगेको छ। आजभन्दा ५१ दिन अघि अर्थात् ६ वैशाखसम्म कोरोनाबाट तीन हजार ९१ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । त्यो दिनमात्रै एक जनाको मृत्यु भएको थियो भने बुधबार ८१ जनाको मृत्यु भएको छ ।
त्यसयता लगातार मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दै आएको छ। त्यसको १० दिनपछि १६ वैशाखबाट काठमाडौंलगायत देशका बिभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ। निषेधाज्ञा लागू भएको दिन १६ वैशाखमा कोरोनाबाट २६ जनाको मृत्यु भएको थियो । निषेधाज्ञा अघिको १० दिनमा १५५ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । त्यसपछिका १० दिनमा देशका ७० जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइएको थियो। निषेधाज्ञा लगाएको पहिलो १० दिनमा ४७४ जनाले कोरोनाबाट ज्यान गुमाएका थिए । २६ वैशाखमा मात्रै ८८ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
निषेधाज्ञामा पनि कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या घट्न सकेन । उपचार र अक्सिजनको अभावमा ज्यान गुमाउनको संख्या चार गुणाले बढ्यो । २७ वैशाखदेखि ५ जेठसम्मको १० दिनमा एक हजार ९३७ जनाको ज्यान गयो। ५ जेठमै पनि २४६ जनाले ज्यान गुमाए ।
त्यसपछिका १० दिनमा पनि कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्यामा कमि आएन। ६ देखि १५ जेठसम्म एक हजार ५०६ जनाको मृत्यु भयो । १५ जेठसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या सात हजार १६३ पुगेको थियो । रासस
निषेधाज्ञामा देशभर घटे २ सयबढी लैङ्िगक हिंसा